Ternyaahụ, agụchara m ịgụ Starfish na Spider: Ike a na-apụghị igbochi nke nzukọ ndị na-enweghị isi. Ọ bụrụ na m ga-ahazi ya, ọ nwere ike ịbụ 3 ma ọ bụ 4 n'ime 10. Ọ bụ ngwa ngwa ịgụ na ozi dị n'azụ ya bụ ma n'oge ma dị oke mkpa. N'eziokwu, agbanyeghị, enwere ike bipụtara ya dịka akwụkwọ ọcha ma nwee otu mmetụta ahụ. Nke ahụ enweghị mmejọ na ndị ode akwụkwọ… ọ bụ naanị na akwụkwọ ahụ bụ otu nchọpụta na nkwenye. Ọ bụghị akwụkwọ e ji eme ihe.
Akwụkwọ Bob Prosen, Kiss Theory ọ dị mma dị nnọọ iche. Ozugbo m welitere akwụkwọ a, ọ dị m ka m ga-arịdata onye na-amụ ọkpọ ma banye n'ụgbọ mmiri rọketi. Naanị m site na iwebata ma enweela ozi bara uru. Nke a bụ teaser - omume nkwarụ ise na-eme ka ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche ọsọ ọsọ:
Ummm… ouch! Bob chịkọtara nkụda mmụọ m na-enwe n'ọrụ m. Ana m arụ ọrụ maka onye ọrụ dị egwu, nke na-aga nke ọma na-eto dị ka onye nzuzu. Ka ndị ọrụ na nkwalite ndị ọzọ, ọ dị ka anyị nwere nwayọ nwayọ karịa. Bob amaghị ihe ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ anyị mana ọ kpọgidere ya kpamkpam! Ndị a na- kpomkwem ihe ndị na-selata anyị na anyị ga-agbanwe ozugbo.
E nyefere m ụfọdụ ndị nọ n'ọgbakọ anyị otu akwụkwọ a. Enwere m olile anya na ha emeela ya site na iwebata! Enweghị m ike ichere ịkọwa n'ime akwụkwọ ndị ọzọ. Akwụkwọ ahụ anaghị elekwasị anya na omume ndị a na-emebi emebi, ọ na-elekwasị anya na ihe dị mkpa iji gbanwee nzukọ ma mee ka ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi!
Ekwenyesiri m ike na m ga-eso gị kerịta ọtụtụ ihe site n'akwụkwọ a n'ime izu ole na ole sochirinụ. Bulie otu Kiss Theory Good bye nke Bob Prosen dere ka anyị wee nwee ike ikwurịta ya ọnụ.